Naninona no omaly no fotoana nofidian’ny praiminisitra teo aloha hametrahany ny fialany ? Inona no dikan’ilay teny farany hoe mandrapihaona ? Misy antony ny zava-drehetra. Im-piry moa no efa notakiana ny fialan’ity praiminisitra ity saingy hainy hatrany hatramin’izay no nilaza fa niasa dia niasa ny tenany sy ny governemanta izay notarihiny ? Izay afera maloto voaravaka kolikoly tsy voatonona ny anarany no nanenina. Afera izay tena nampiaiky ny rehetra fa nikitikitika ny ain-dehiben’ny firenena kanefa dia tsy ity praiminisitra teo aloha ity no niangonan’ny rihitra fa ireo voarohirohy ho namita ireo iraka nampanaoviny hatrany. Raha tena nanam-pahendrena tokoa ve ity “tompon’andraiki-panjakana” teo aloha ity tsy tokony ho nahay nanaja tena tamin’ireny fotoana ireny satria efa be ireo porofo nivoaka fa zary lasa “Gouvernement de dégat” ilay nolazainy fa “Gouvernement de combat” notarihiny ? Izao tokoa ve “vao tonga”, araka ny nolazainy omaly, ny fotoana hanapahany hevitra amina olom-pirenena tompon’andraikitra azy sa efa tsy fidiny na misy toerana hafa nampanantenaina horaisiny atsy ho atsy any ka dia hoe mandrapihaona tokoa aloha izany ?